जापानमा मिन्ना आरु नेपालमा भ्रष्टाचार
शेखर ढुंगेल -
जापान बिश्व मै एउटा अनुपम उदाहरणनिय देश हो । यो देशले उच्चतम आधुनिक प्रविधि, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र मानबाधिकारको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको छैन । परम्परागत जापानिज मौलिक बिशेषतालाई पनि जस्ता को तस्तै जोगाएरसंगै अगाडी बढाई राखेको छ । धयचप ष्क धयचकजष्उ भन्ने भावना बोकेका जापानिज हरु धर्मप्रति त्यति चासो राख्दैनन ।त्यसैले आज भन्दा २०० बर्ष अगाडी नै प्रवेश गरेको इशाई धर्म अपनाउनेहरु ३.५ पनि छैनन् ८५.५ बुद्धिस्ट र बाँकी पुरानो धर्म सिन्तो का अनुयायी छन् ।
आर्थिक रुपले जापान कमुनिस्ट पार्टी बलियो भए पनि राजनीतिमा हाबी भएको छैन । मजदुर हितको संरक्षण नै उसको मुख्य ध्येय हो । संसारकै पुरानो राजसस्था पनि सर्बा्धिक मर्यादामा त्यही छ ।जनता को दु:ख सुखमा सम्मिलित हुनु बाहेक राजनीतिसित दरबारलाई मतलब छैन । ९० को दशकमा जापानको सरकारी स्कुलहरुमा अंग्रेजी भाषा बिषयलाई प्रवेश पढाउने कि पढाउने ? गराउने बिषयमा विवाद भयो सरकारले जनमत संग्रह गर्यो । बहुमतले हाम्रो भाषा अरुले सिकुन्, हामी किन सिक्ने ? भन्दै अस्विकार भयो । अंग्रेजी पढ्ने भए जापानिजले प्राइभेट इन्स्टिच्युटमा जानुपर्छ । अनुशासन, सहयोग र सद्भाबका लागि पनि जापानिज हरु संसारकै नमूना रहेका छन् । चोरी गर्नु अक्षम्य पाप ठान्ने जापानिजहरु बाटो मा फेला परेका पैसाले भरिएका ब्यागहरु प्रहरीलाई लगेर बुझाइ दिन्छन् ।
अब जाउ जापानको ‘मिन्ना आरु’ र नेपालको भ्रष्टाचारको प्रसंगमा । जापान मा परम्परागत सार्बजनिक स्नान् घर भएको सबैले सुनेका छौ र जापान पुगेका नेपालीहरुले अनुभब पनि गरि सकेका छन् । जहाँ पुरुष तर्फको हल (स्नान कक्ष) मा ज्वाई जेठान ससुरो बाजे नाती जस्ता नजिकका नातेदार नै किन नहुन् र अर्को कक्षतर्फ सासु बुहारी हजुरआमा नातिनी सबै प्राकृतिक स्वरुपमा बिना कुनै बस्त्र स्नान (अफुरो) मा जाने चलन छ । हामीमा स्वभाबिक रुपले प्रश्न उठी हाल्छ छि: लाज लाग्दैन भनेर ? जापानिजहरु सहज उत्तर दिन्छन ‘मिन्ना आरु’ अर्थात सबैको छ, उस्तै छ भने के को लाज ?
जापानिजहरुको त्यो परम्परागत स्नान घरमा लागु हुने के को लाज नेपालमा भने भ्रष्टाचारकोको मामलामा हुबहु लागु हुन्छ । नेता, प्रशासक, संघ सस्थाका जोसुकै सिधै वा घुमाइ भ्रष्टाचार गर्छन् अनि उनीहरुलाई सोध्यो लाज लाग्दैन भ्रष्टाचार गर्न ? सहज उत्तर दिन्छन– सबैले गर्छन् भ्रष्टाचार मलाई मात्र के को लाज ?
नेपालको राजनीति भनेकै नङ्गा नाचे हजार दाउ हो । चुनावको टिकट लिन, जित्न, सभासद हुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायहरुमा स्थापित हुनसमेत पैसाको चलखेल हुन्छ । अनि सुशासन र समृद्धि सपनाको कुरा हुनै नै भयो ।
भनेपछि खाको पाको लाको यही सस्कृति भयो नयाँ नेपालको ? बिगत ३ दशको अस्थिर सरकार र महँगो निर्वाचन प्रवृति भ्रष्टाचारको मूल आधार देखिन्छ । सुडान काण्ड ज्वलन्त उदाहरण हो हिजो गिरिजा र प्रचण्डको लागि, आज देउवा, प्रचण्ड, ओली टिमका लागि ।
एक नेताले सांसद निर्वाचनमा ३ करोड खर्च गरे तर हारे अहिले पैसा नभए ऋण तिर्न फिटी फिटी परेका छन् । अब ती नेताले निर्वाचन जितेर मन्त्री भएको भए कम्तिमा १० करोड त भ्रष्टाचार गर्थे गर्थे । चुडामणि शर्मा, गोपाल खड्का र सुन काण्डमा मुछिनेहरुले राजनीतिक संरक्षण बिना भ्रष्टाचार गरेका छन् र ? यसैले त भ्रष्टाचार कम हुन नसकेको हो ।